Ampiasaina inona ny sulfatine gentamicin? - BALLYA
Posted on Desambra 21, 2020, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona ny atao hoe sulfate gentamicin?
Fampiasana sy dosie
Inona avy ireo voka-dratsin'ny vokatry ny gentamicin sulfate?
Vokatry ny sifotra Gentamicin
Fiaraha-miasa amin'ny zava-mahadomelina
Gentamicin sulfate dia antibiotika an-habakabaka aminoglycoside, izay misy fiantraikany amin'ny bakteria sy bakteria amin'ny bakteria miiba gram-ratsy sy tsara. Izy io dia misy fiatraikany mahery amin'ny bakteria Gram-négatif toy ny Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter, Pneumoniae, Salmonella, Escherichia coli ary Proteus, ary Staphylococcus aureus.
BALLYA manome a fitsapana gentamicin mba hilazana aminao raha misy residu gentamicin amin'ny vokatra vita amin'ny ronono izayhaninao isan'andro.
2. Pharmacology sy Toxicology
Ity vokatra ity dia antibiotika aminoglycoside. Izy io dia misy fiantraikany tsara amin'ny bakteria amin'ny bakteria gram-negatif sy bakteria gram-positive. Izy io dia misy fiantraikany tsara amin'ny bakteria amin'ny Enterobacteriaceae isan-karazany toy ny Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Serratia, ary Pseudomonas aeruginosa.
Neisseria sy Haemophilus influenzae dia mora tohina amin'ity vokatra ity. Izy io dia misy fiatraikany ihany koa amin'ny Brucella, Yersinia pestis, Acinetobacter ary Campylobacter fetus. Izy io dia misy fiantraikany tsara amin'ny bakteria amin'ny 80% ny karazana methicillin mora tohina ao Staphylococcus (ao anatin'izany ny Staphylococcus aureus sy ny coagulase-negatif Staphylococcus), fa ny ankamaroan'ny karazana fanoherana methicillin dia mahazaka ity vokatra ity.
Ny vokatr'izany Streptococcus sy Streptococcus pneumoniae dia ratsy, ary ny ankamaroan'ny Enterococcus dia mahatohitra ny vokatra. Rehefa ampiasaina miaraka ity vokatra ity laktam-, ny ankamaroan'izy ireo dia afaka mahazo voka-dratsy antibacterial synergistic.
Ny fomba fiasan'ity vokatra ity dia ny fampifangaroana sy ny subunit 30S an'ny ribosome bakteria mba hanakanana ny synthesie proteinina bakteria. Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny isan'ny bacilli-gram tsy manohitra gentamicin nitombo be.
Aorian'ny tsindrona intramuskular, ny vokatra dia voadoka haingana sy feno, mahatratra ny haavon'ny plasma avo indrindra (Cmax) ao anatin'ny 0.5 ka hatramin'ny 1 ora. Ny antsasaky ny fanafoanana ny rà (t1 / 2b) dia manodidina ny 2 ka hatramin'ny 3 ora, ary afaka maharitra lava amin'ny marary mihena ny fiasan'ny voa. Ny tahan'ny fatorana proteinina dia ambany.
Azo zaraina amin'ny sela sy tsiranoka samihafa ao amin'ny vatana izy io, manangona ao amin'ny sela kortinal voa, ary afaka miditra amin'ny foetus amin'ny alàlan'ny sakana eo amin'ny placental, fa tsy afaka miditra mora amin'ny tsiranoka ao amin'ny ati-doha sy tsiranoka cerebrospinal amin'ny alàlan'ny sakana amin'ny tsiranoka-cerebrospinal. Tsy miharo metabolika ao amin'ny vatana izy io, ary mivoaka amin'ny urine satria prototype amin'ny alàlan'ny filtration glomerular, ary mamoaka 50% ka hatramin'ny 93% ny doka ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fitantanana.
Hemodialysis sy dialy peritoneal dia afaka manala fanafody be dia be avy amin'ny ra ary mampihena ny antsasaky ny fiainana.
Ny fomba fiasan'ity vokatra ity dia ny famehezana mafy ny proteinina manokana amin'ny vatan'ny vatana riboprotein bakteria, manelingelina ny fiasan'ny vatana riboprotein, misoroka ny synthesis proteinina, ary mitarika ny lesoka amin'ny kaody momba ny asidra ribonucleic messenger (mRNA ) mamolavola proteinina tsy miasa.
Izy io dia ampiasaina amin'ny klinika ho an'ny sepsis, aretin'ny taovam-pisefoana, aretina otrikaretina biliary, peritonitis purulent, aretina intracranial, lalan-dra vokatry ny Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Shigella, Klebsiella, Proteus ary bakteria hafa saro-pady toy ny aretina sy ny fivalozana.
Izy io dia mety amin'ny fitsaboana aretina lehibe ateraky ny bacilli grama ratsy, toy ny Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Serratia, Pseudomonas aeruginosa ary Staphylococcus methicillin taolana mora tohina, toy ny sepsis, ny aretin'ny taovam-pisefoana ambany, ny tsinay, aretin-kibo, aretin-kibo ao an-kibo, aretin-koditra sy tavy malemilemy, aretin-tratra urinary sarotra, sns. gentamicin ary fanafody antibiotika hafa dia matetika ampiasaina amin'ny fampiharana ara-pahasalamana. penisilinina (na ampicillin) miaraka amin'ny sulfate gentamicin afaka mitsabo ny aretin'ny Enterococcus.
Ho an'ny aretin-kozatra afovoany ateraky ny bakteria mora tohina, toy ny meningite sy ventriculitis, ny tsindrona intrathecal an'ity vokatra ity dia azo ampiasaina ho fitsaboana adjuvant.
3. Fampiasana sy dosie
Tsindrona intramuskular an'ny olon-dehibe na mitete intravenous aorian'ny fanalefahana, 80 mg (singa 80,000) indray mandeha, na 1 ～ 1.7 mg / kg arakaraka ny lanjan'ny vatana indray mandeha, indray mandeha isaky ny 8 ora; na indray mandeha 5 mg / kg, indray mandeha isaky ny 24 ora. Ny fizotry ny fitsaboana dia 7 ka hatramin'ny 14 andro. Mandritra ny fampidirana intravena dia ampio fatra 50 ～ 200ml tsindrona sodium klôro klôro 0.9% na tsindrona glucose 5%. Ny habetsaky ny ranoka ampidirina mandritra ny fampidirana intravena indray mandeha isan'andro dia tsy tokony ho latsaky ny 300ml ka tsy mihoatra ny 0.1% ny fatran'ny vahaolana zava-mahadomelina, tokony halefa miadana ao anaty 30 ka hatramin'ny 60 minitra ny vahaolana hialana amin'ny fanakanana ny neuromuscular.
Tsindrona intramuskular zaza na mitete intravenous aorian'ny fanalefahana, 2.5 mg / kg indray mandeha, indray mandeha isaky ny 12 ora; na 1.7 mg / kg indray mandeha, indray mandeha isaky ny 8 ora. Ny fizotry ny fitsaboana dia 7 ka hatramin'ny 14 andro, izay tokony hanarahana maso fatratra araka izay tratra ny fifantohan'ny ra, indrindra ho an'ireo zaza vao teraka na zazakely.
Ny fatra fitantanana intrathecal sy intracerebroventricular dia 4-8 mg indray mandeha ho an'ny olon-dehibe, ary 1-2 mg indray mandeha ho an'ny ankizy (mihoatra ny 3 volana), indray mandeha isaky ny 2 ka hatramin'ny 3 andro. Mandritra ny tsindrona dia arotsaho ny vahaolana zava-mahadomelina amin'ny fatrana tsy mihoatra ny 0.2%, ary paompy ao anaty verite 5ml na 10ml steril. Aorian'ny famoahana ny lumbar dia manaova ranon-tsavony cerebrospinal be dia be ao anaty syringe ary manosika mandritra ny pumping mba hanesorana tsimoramora ireo fanafody rehetra ao anatin'ny 3 ka hatramin'ny 5 minitra.
Fatrany ho an'ny marary manana fiasan-drà voa: tsy maharitra isaky ny 8 ora ho an'ny marary manana fiasan'ny voa ara-dalàna, fatra mahazatra 1 ～ 1.7 mg / kg, ary taha 10 ～ 50ml / min isaky ny 12 ora isaky ny 30 ora 70 ka hatramin'ny 10 20% amin'ny fatra mahazatra; rehefa latsaky ny 30ml / min ny tahan'ny fahazoana kôlininina dia 24-48% ny fatra mahazatra dia omena isaky ny XNUMX ka hatramin'ny XNUMX ora.
1. Vokatry ny sifotra Gentamicin
Mitovy amin'ny kanamycin, misy fiatraikany lehibe kokoa amin'ny lavarangana sofina, fa tsy dia manimba ny cochlea. Ny tena fisehoana dia ny fanina sy ny tinnitus. Ho an'ireo olona tsy ampy renal na ankizy, dia tokony hokarohina bebe kokoa ny fihetsika misy poizina. Amin'ny tranga henjana dia mety hiteraka tsy fahatongavan-tsofina na ho marenina mihitsy aza.
Satria ny vokatra dia misy fiantraikany manakana ny fihaonan'ny neuromuscular, dia tsy mety amin'ny tsindrona intravenous na fampidiran-dra haingana be mba hisorohana ny famoizam-po amin'ny taovam-pisefoana. Ny olona tsy mahazaka an'ity vokatra ity na aminoglycosides hafa dia tokony handrara ity zava-mahadomelina ity.
2. Fihetsika manohitra
Ny fanafody dia mety miteraka fihainoana, tinnitus, na fahafenoan'ny sofina ary fanehoan-kevitra ototoxic hafa. Ny fandehanana tsy mihozongozona sy fanina dia mety hitranga rehefa voakasik'izany ny fiasan-damba. Ny fanehoan-kevitra nefotozika toy ny hematuria, ny fihenan'ny fihenan-tsasatra sy ny fivoahan'ny urination, ny fahaverezan'ny fahazotoan-komana ary ny hetaheta mafy dia mety hitranga. Ireo izay tratry ny tratry ny ambany dia manana dispnea, malemy ary malemy noho ny fanakanana ny neuromuscular na nephrotoxicity. Indraindray, maimaika ny hoditra, maloiloy, mandoa, mihena ny fiasan'ny aty, leukopenia, neutropenia, tsy fahampian-dra, hita ny fihenan-tsofina.
Ny marary vitsivitsy dia mety hiaina soritr'aretina ototoxic toy ny fahaverezan'ny fihainoana, tinnitus na feno ny sofina aorian'ny fampiatoana ny zava-mahadomelina, noho izany dia tokony horaisina ny saina.
Ny fitantanana rafitra miaraka amin'ny tsindrona intrathecal dia mety hiteraka fivontosan'ny tongotra, fivontosan'ny hoditra, tazo ary fivalanan'ny vatana.
Ny vokatra dia afaka mamakivaky ny sakana eo amin'ny placental ary miditra amin'ny vatan'ny foetus, izay mety hiteraka fahasimban'ny fihainoana ny foetus. Ny vehivavy bevohoka dia tokony handanja tanteraka ny mahatsara sy maharatsy azy alohan'ny hampiasana ny vokatra. Ny vokatra dia nafenina kely amin'ny ronono, fa matetika ny vehivavy mampinono dia tokony hijanona tsy mampinono mandritra ny vanim-potoana fitsaboana.
Gentamicin dia aminoglycoside. Tokony ampiasaina am-pitandremana amin'ny dokoteran-jaza, indrindra ho an'ny zaza vao teraka sy ny zaza vao teraka. Satria tsy mivoatra tanteraka ny hozatry ny voa, dia maharitra ny antsasaky ny an'io karazana fanafody io, ary mora miangona ao amin'ny vatana ary miteraka fanehoan-kevitra misy poizina.
Ny fiasan'ny voa ataon'ny marary be taona dia manana fihenan'ny fisiolojika. Na dia ao anatin'ny salan'isa mahazatra aza ny sanda refesin'ny fiasan'ny voa, dia tokony hisy fitsaboana kely. Ireo marary zokiolona dia mety hanana fihetsiketsehana poizina isan-karazany aorian'ny fampiharana ity vokatra ity, ary ny fifantohana zava-mahadomelina dia tokony harahi-maso faran'izay betsaka mandritra ny fitsaboana.
Tokony homena rano ampy ny marary hampihenana ny fahasimban'ny tubules voa.
Ny fampiharana maharitra dia mety hitarika fitomboan'ny bakteria mahatohitra.
Tsy mety amin'ny tsindrona subkutanezy.
Ny vokatra dia misy fiantraikany amin'ny fanakanana ny fifohana rivotra, ka tsy avela ny tsindrona intravena.
Ny vokatra dia tokony hampiasaina am-pitandremana amin'ireto toe-javatra manaraka ireto: ny marary tsy ampy rano, manimba ny hozatra, ny myasthenia gravis na ny aretin'i Parkinson ary ny fahasimban'ny voa.
Allergy. Ireo marary izay tsy mahazaka antibiotika aminoglycoside toy ny streptomycin ary ny amikacine dia mety tsy mahazaka an'io vokatra io.
Ny fitsiriky ny urine sy ny renal mahazatra dia tokony hatao tsy tapaka alohan'ny sy mandritra ny fanafody mba hisorohana ny fihenan'ny nephrotoxic matotra. Raha ilaina dia manaova audiometry na audiogram, indrindra ny audiometry haingam-pandeha avo lenta sy ny fanentanana ny hafanana, hahitana poizina avy amin'ny vestibular.
4. Fiaraha-miasa amin'ny zava-mahadomelina
Ny fampiasana mitambatra amin'ny aminoglycosides hafa na ny fampiharana eo an-toerana na ny rafitra mifandimby dia mety hampitombo ny mety hisian'ny ototoxicity, nephrotoxicity ary ny sakana neuromuscular.
Ny fampiasana mitambatra amin'ny neuromuscular blockers dia mety hampitombo ny sakana amin'ny neuromuscular, ka miteraka fahalemena amin'ny hozatra, ny fahaketrahana sy ny soritr'aretina hafa.
Manambatra amin'ny capreomycin, cisplatin, asidra étanilika, furosemide, na vancomycin (na norvancomycin), na fampiharana eo an-toerana na eo amin'ny rafi-pitantanana mahomby, dia mety hampitombo ny ototoxisialy sy ny nephrotoxicity.
Fiaraha-miasa eo an-toerana na eo amin'ny rafitra cefalotina ary ny cefazolin dia mety hampitombo ny nephrotoxicity.
Ny fampiasana mitambatra amin'ny tsindrona polymyxin na ny fampiharana eo an-toerana na ny rafitra mifandimby dia mety hampitombo ny nephrotoxicity sy ny sakana neuromuscular.
Ny fanafody nephrotoxic sy ototoxic hafa dia tsy tokony hampiasaina miaraka amin'ity vokatra ity na ampiharina mifandimby, mba tsy hampitombo ny nephrotoxicity na ny ototoxicity.
Aminoglycosides sy lactams β (cephalosporins sy penisilinina) dia mety hiteraka tsy fampiatoana rehefa mifangaro. Ity vokatra ity dia tsy maintsy apetraka anaty tavoahangy hafa rehefa atambatra amin'ny antibiotika etsy ambony.
Gentamicin sulfate dia mety amin'ny areti-mifindra isan-karazany sy ny aretin-kozatra afovoany, nefa misy fiatraikany lehibe amin'ny fihainoana sy ny voa. Ny marary dia tsy maintsy manaraka ny fanaon'ny dokotera rehefa mampiasa an'io fanafody io, indrindra ny vehivavy bevohoka sy ny vehivavy mampinono.
SORATRA: Menaka GENTAMICIN SULFATE
MedlinePlus: Ophthalmic Gentamicin